I Apple Watch akawufaneli luthathe iPhone yakho manje, kodwa izindlela zakamuva ungenza esibi ingxenye eyedwa: ngokuvamile ungakwazi ushiye iPhone yakho ekhaya. Funda le ndatshana ehlanganisa imininingwane ephelele yokuthi ungayisebenzisa kanjani i-Apple Watch Ngaphandle kokumatanisa ku-iPhone.
Ziningi Apple Buka izicelo kuthiwa kakhulu nje kuboniswe ngezinto egijima kwi-iPhone yakho, futhi amanye amaphuzu avelele ukhiye akuzona kufinyeleleke ku ithuba off ukuthi awungeni ifaniswe i igajethi iOS.
Yiba ukuthi isimo sinjani, lokho Watch yakho angenza ithembela phezu kwayo imodeli ethile onayo. Ngokwesibonelo, Watch yokuqala akanayo ngalendoda GPS, ngakho uma ucingo lwakho akusilo emhlabeni awukwazi ulandele ngokwahlukana usuhambe esidlule izinyathelo kulinganiswa. Ngaphansi sizobe ukukhuluma nawe ngokusebenzisa lokho Watch yakho angenza.
1 Indlela Yokusebenzisa Apple Buka ngaphandle Iyamatanisa iPhone
1.1 Landelela Run Yakho
1.2 Landelela aphinde abhukude abuyele yakho
1.3 Buyekeza izinhlelo zakho zokusebenza
1.4 Khokhela Izinto
1.5 Thola ezindizeni noma ukuphuma ayobona amafilimu
1.6 Lalela umculo, Izincwadi zomsindo noma ama-Podcast
1.7 Landelela Ukufaneleka yakho futhi Impilo yakho
Landelela Run Yakho
On the amathuba off ukuthi unayo GPS-zazisiza Apple Watch (Series 2 kuqhubeke) ungakwazi ukulandela lokugijima kwakho ngaphandle kokuthatha ucingo lwakho nawe, futhi sikhumbula ukuthi awukwazi usakaze Apple Umculo uhle non-Cellular ungakwazi okubili umculo iwashi lakho uzwe lana ku-Bluetooth ezindlebeni ngenkathi ukusebenzisa.
Landelela aphinde abhukude abuyele yakho
Lokhu omunye samanje kungcono ezingafinyeleleki Series 1 abanikazi, esikuwo angakhululeki: Watch abakutholanga ukumelana namanzi okuhlupheka, ngize Series 2, okuyinto amandla wena ukugqoka usenabo ukubhukuda.
Apple siqu bhukuda elandelayo Kuthi eliyisisekelo, kodwa zikhona izindodla kwezicelo inyumbazane ukuze ivumelane imfuneko ngamunye.
Buyekeza izinhlelo zakho zokusebenza
Original Apple Watch izicelo abangu kakhulu nje kuboniswa: isicelo bangempela wenza wonke umsebenzi walo ku-iPhone yakho Watch nje wabonisa wena kwemiphumela.
Lokho kwashintsha nge watchOS 2, okuyinto ethulwa izicelo zendawo: leyo, izicelo ukuthi ngempela wagijima-Apple Watch.
Zonke Apple amawashi watchOS egijima 2 noma kamuva ungaba izicelo ukuvuselela esebenzisa-Wi-Fi, kanti ezinye izinhlelo zokusebenza zingase futhi uthole esebenzisa umakhalekhukhwini ukuhlela i-GPS + onobuhle yeselula.
Uma ususethe Apple Khokha Buka iPhone sika isicelo, ungakwazi ukukhokhela izinto ngaphandle kokulindela ukuba iPhone yakho eziwusizo. Lokho ngezizathu zokuthi isicelo kwenza ithokheni ephawulekayo lahlani Nilindile ukusetshenziswa njengendlela inombolo yekhadi – evumela ukuba usebenzise Apple Khokha kunoma iyiphi mcimbi, uma ungekho ucingo lwakho.
Ukukhokha, ngokuyisisekelo ngiyontengantenga iwashi lakho kutheminali Apple Pay-ephelele bese uyeke ngokuphelele NFC (Near field communication) umsakazo ukwenza into yayo.
Thola ezindizeni noma ukuphuma ayobona amafilimu
Apple Wallet nge-Apple Watch, ngakho yini ngaphambili lahlani kuwo – amathikithi endiza, amathikithi electronic futhi noma yini efundekayo okunye – kufanele asebenze okuhle futhi Dandy ngaphandle iPhone yakho.
Ngokudabukisayo, akuzona zonke izinhlangano ziye sengikuqonda lokhu, ngakho siyakucela namanje njalo uhambahamba emhlabeni nge emaphaketheni futhi satchels ukulayishwa nge plastic, Nokho, siyakucela abagcina izinto uya nge-computer.
Lalela umculo, Izincwadi zomsindo noma ama-Podcast
Watch has isitoreji ayo, ezinye zazo iyatholakala umculo – ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Watch esakhelwe Bluetooth ukuze bhanqa ambalwa earphones akude futhi uthole umculo ezihambayo.
Ngokuvamile ngeke zithole ithuba ukuze usakaze umculo kusuka kunoma iyiphi usesimweni Spotify noma i-Apple Umculo ngaphandle imodeli cell, kodwa kukhona zonke esingasindisa kudingeke ngaphakathi nokunqwatshelaniswa for run, umsebenzi noma drive iDemo. Uma kwenzeka ungabi sisebenzisa Apple Umculo ungenza uhlu lwadlalwayo kufinyeleleke unqamukile ku-Apple lwakho lokubuka.
Ezinye izinhlelo zokusebenza umfokazi futhi wenze lokhu kanye, Ngokwesibonelo, Ezwakalayo ngakho ungakwazi ukugcina incwadi yakho okuqoshiwe engalweni yakho.
Landelela Ukufaneleka yakho futhi Impilo yakho
I Apple Watch akadingi bhanqa iPhone yakho ukuze libe yisihenqo ishayela yakho noma umsebenzi: ke ungakwazi ukugcina ukuthi ulwazi kanye ukuvumelanisa ukuba isicelo Impilo uma ubuyela kusukela ukugijima kwakho, umjikelezo noma baya maphakathi lenge. Kukhona futhi ezahlukene zokusebenza inyumbazane kahle kufinyeleleke, Ngokwesibonelo, ukudla.
I Series 4 onobuhle ukuthatha izinto kakhulu phambili ishayela kugqugquzelwe ukuba athuthukiswe elandelayo ngisho ukuwa indawo, okuyinto amamodeli weseli ongazisebenzisa ukuze zixwayisa abantu ofanele uma kwenzeka ukuthi unayo ukuwa esesabekayo.
Funda lesi sihloko okuhlanganisa ulwazi oluphelele mayelana Indlela Yokusebenzisa Apple Buka Ngaphandle Iyamatanisa iPhone. Lapha uzothola yonke imisebenzi ehlukene ungenza usebenzisa Apple lwakho lokubuka ngaphandle abhanqiwe iPhone.
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Tagged With: Indlela Yokusebenzisa Apple Buka Ngaphandle Iyamatanisa iPhone